Abanye abavelisi kunye nababoneleli - China Abanye abaFektri
UKUSETYENZISWA NGOKUGCINWEYO IStrongStep® FOB Rapid Test Strip (ilindle) kukubonwa okukhawulezayo kokubonwa komgangatho wokuchongwa komgangatho wehemoglobin yomntu kwimifuziselo yelindle yomntu. Le khithi yenzelwe ukuba isetyenziswe njengoncedo ekuchongeni izifo ezisezantsi zesisu (gi). INTSHAYELELO Umhlaza ongumbala yenye yezona zinto zixhaphakileyo zomhlaza kunye nesona sifo siphambili ekubulaweni komhlaza eMelika. Ukuvavanywa komhlaza obala ngokungacacanga kusonyusa ukufunyanwa komhlaza kwi ...
Isisombululo sokudibanisa i-Fungal
IFungusClearTMIsisombululo se-Fungal fluorescence staining sisetyenziselwa ukufumanisa ngokukhawuleza usulelo olwahlukileyo lokungunda kwizifo ezitsha ezibandayo okanye ezinqabileyo zeklinikhi, iparafini okanye i-glycol methacrylate izicubu ezifakwe ngaphakathi. Iimpawu eziqhelekileyo zibandakanya ukukrola, isikhonkwane kunye neenwele zedermatophytosis ezinje nge-tinea cruris, i-tinea manus kunye ne-pedis, i-tinea unguium, i-tinea capitis, i-tinea versicolor. Kwakhona zibandakanya isikhohlela, i-bronchoalveolar lavage (i-BAL), ukuhlamba i-bronchial, kunye ne-biopsies yeethishu ezivela kwizigulana ezosulelayo zokungunda.
UKUSETYENZISWA KWENJONGO Uvavanyo lweStrongStep® Procalcitonin luvavanyo lwe-immune-chromatographic olukhawulezileyo lokufumanisa ubungakanani beProcalcitonin kwi-serum yomntu okanye iplasma. Isetyenziselwa ukuxilonga kunye nokulawula unyango lwezifo ezinobuzaza, ezosulelayo kunye ne-sepsis. INTSHAYELELO Procalcitonin (PCT) yiprotein encinci equka intsalela ye-amino acid eyi-116 enobunzima beemolekyuli malunga ne-13 kDa eyaqala ichazwa nguMoullec okqhubekayo. I-PCT iveliswa ngesiqhelo kwiC-cel ...
Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19,